Farqiga of xafiiska guud iyo suuqa kala dhaddig oo waqti inaad soo amaahato lacag
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Farqiga of xafiiska guud iyo suuqa kala dhaddig oo waqti inaad soo amaahato lacag
Recently, macaamiisha ayaa sii kordhaya dhaqaale ee dhibic caching ee xiriirka dumarka-keliya, loo yaqaan sumcad wanaagsan.
Tani waa daaqad in guud ahaan la heli karo, aad ka qabto waxa ku kala duwan yihiin in la yidhi.
dumarka kuwaas oo doonaya in ay codsadaan caching mustaqbalka Fadlan tixraac.
waa feature a of dhibic guud ee xidhiidhka iyo dumarka oo kaliya uu furmo suuqa?
dheer ka hor maaliyadda macaamiisha in, sidii uu u dhawaaqay Sarah dahab ah, waa maxay inaad soo amaahato lacag asalka ahaa images xoog leh, sida nin.
, si kastaba ha ahaatee, in aad tahay gaaban lacag xitaa in ay dhacdo haween ma aha wax aan caadi ahayn.
Sidaas daraaddeed, waa hal dhibic oo kaliya xiriirkaas ayaa soo muuqday ayaa la tixgeliyo si aad dareemi kartaa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan in haweenka. Waxaa jira kala duwanaan yar oo kasta
xirfad leh ee farshaxanka, ku kala duwan yihiin inta dhibcood, sida kuwan soo socda.
Shaqaalaha yihiin haween
ka ugu horeysay ee ka mid ah wadaha in uu fuliyo aqbalo oo la tashanaya waa in dumarka oo dhan.
Tani waa dareenka caabiga maaliyadda macaamiisha by dumar ah dadka isticmaala ay, waxa la sheegay in loo qaaday si ay u tirtiraan xitaa wax yar.
hor jeeda ayaa sheegay in dadka isku jinsiga ah Kotomori, si daacad ah la tashan kartaa dareenka walwalsan, karaa laabtay in aad isku dejiso oo xataa dekedaha telefoonka, sida aad sheegaya in faa'iidooyinka badan ee diyaarad ruuxa.
Sidoo kale, in kasta oo maaliyadda macaamiisha, waxaa lagu gartaa haweenka oo ka mid ah sawiro iyo sawirada in racfaan ka soo baxay shirka horteeda.
Ladies amaah, guri-friendly, weedha ah waa calaamad sida, ayaa codsiga ka badan waa u fududahay in sida jawi fiican u qalabeysan. dadka
waxa aan la ilaa iyo haatan la isticmaalayo waxa kale oo aad telefoonka ma dareemi kartaa iska caabin ah.
suuqa kala dumarka-keliya, sameeyey by operator dumar ah iyo sidoo kale, sida xaqiijinta diiwaangelinta in goobta shaqada ama guriga. Isagoo ka hadlayay of
maaliyadda macaamiisha, telefoonka codsatay in ay goobta doonayn dad yar oo qoorta.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay telefoonka ka naagtii, sidoo kale waa in ka yar tahay in la arkaa in ay ka maaliyadda macaamiisha.
oo aan wax walwal dheeraad ah, waxa ay noqon doontaa maal macaamilka la heli karo.
dulsaarka in la heli karo si loogu tala galay dumarka
dulsaarka, kaas oo ku dhow inuu ku hoos qorshaha loogu tala galay dumarka
waa mid ka mid ah qaababka.
tani waa, uma siyaadiyo Waxaan dakhli aad u badan xitaa haddii haweenka ka shaqeeya iyo, in meesha ugu horeysa daqiiqadii qof dumar ah oo aan la amaahday lacag badan, kuwa tixgelin xaqiiqada ah in dulsaarka qaali dareemi lahayd.
Dabcan, haddii aanay jirin at dhan dakhliga iniinahoodu ku dhex jiraan, maxaa yeelay, amaahdo lacag ay ku tiirsan yihiin dakhliga xaaska, dib u eegista iyo xataa noqdaan adag.
Dhab ahaantii, codsiga daynta by guri joogta ah, iyo qofka la fuliyay codsiga, lagu daray dakhliga xaaska, ayaa la aasaasay by sharciga iyo xaddiga lacagta heli qeybi ka mid ah saddex-meelood meel ka mid ah lacagta amaahda ah.
haddii, aynu ka xisaabinta ka hor haddii loo baahan yahay xaddi weyn oo lacag si ay u fuliyaan codsiga. tixraaca /
arki / marka href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> lacagta bangiga jiro heerka dulsaarka guud
Sidee sidoo kale si aad u codsato farqiga u ah in wakhtiga ugu amaahda lacag maaliyadda macaamilka < / H2> in ay dhacdo
amaah haweenka oo kaliya, iyada oo aan isticmaalka mashiinada heshiis la saarnayn, waxaa inta badan waa dhan jawi dhameystiran codsiga ah ee Internet-ka ayaa loo magacaabay.
Tani waa, ilaa xad iyo hooyooyinka guri aan lahayn carruurta yar yar guriga sida caadiga ah, tixgelin waxaa dhinaca fudud si ay u dareemaan haweenka iska caabin ah xafiiska si toos ah u tagaan.
user, oo aan ka werwerayn oo ku saabsan indhaha dadweynaha, maxaa yeelay awood u si xor ah u saxiixo, waxa uu noqday sabab ah oo caan ah.
Kooban < / H2> caching in
suuqa kala haweenka oo kaliya, sababtoo ah shaqaalaha dhaddig oo u go'ay u dhiganta, waa amaan Xitaa haddii aad saxiixdo baaritaan ugu horeysay. Sida dareenka walwalka
iyo su'aalo sidoo kale ay awoodaan in ay isla markiiba la tasho noqon doonaa.
Intaa waxaa dheer, tan iyo markii ay baaritaan ku meel shaqada by naagta fuliyay, waxaa jira walwal ku saabsan Bale ee goobta shaqada ee la shaqayn jiray ka.
sidoo kale dusha adeega, sida Dabcan dulsaarka hoose ee u go'ay ay diyaar u yihiin, waxaa jira hab adoo isticmaalaya dhedig ah.
Si kastaba ha ahaatee, baaritaanka, sababtoo ah waxaa la sameeyaa si la mid ah iyadoo aan loo eegin lab iyo dheddig, Isku day in aad ka dalban iyada oo la tixgelinayo awoodda dhinaca dakhliga iyo bixinta.
Intaa waxaa dheer, codsiga Maaliyadda macaamilka ayaa tiro sii kordhaysa oo ka mid ah xaaladaha in uu noqon karaa xitaa internetka. Haddii
in this, on top sidoo kale aan shaki u muuqataa in ay dadka ku nool xaafadda, waa ku haboon shaqeyn karno oo aan u socday si ay u dareemaan muuqdaan xafiisyada iyo saarnayn iska caabin ah mashiinka heshiiska.
haddii, haddii kharashka lama filaan ah argaggixiyeen, sidoo kale waxay leeyihiin lahaa fursad u maal-ururinta in hab kuwan. Caching in
haddii, haddii kharashka lama filaan ah argaggixiyeen, sidoo kale waxay leeyihiin lahaa fursad u maal-ururinta in hab kuwan.